Oromoon Europa Gumaa Baratotaa Oromoo ni bafana jeechun murtefate!!!
Oromoo Ajeechaa, Hidha, Dararama, Barumsa irra ari’amuu ijoolee Oromoo fi yakka Baratoota fi Uumataa Oromoo irratti Mootummaan wayyanee dalaga jiru, Oromoon gumma bafaachuu qaba jeechun arii fi onneen wayyanee balaleefatee jira. Oromoon kana booda siirna Garboonfata Habasha kami waliin kan hin hiriree fi dhigga ijoolee Oromoo dhangala'ee hunda gumma basuun dirqama Oromoo akka ta’ee iyyatama ture. Oromoo hundi onneen isaa kan mada’ee fi dhiiri fi dubartiin arii isaan dhadachuu qoofa utuu hin tanee himiiman baasani boo’’uun wayyanee irrati murtee gara isaan ibsacha turen. Oromoon wayyanee ykiin Habasha kamiin waliinu hiriiruu dhabuu akka qabu gaafatamee jira. Ethiopia dhiigga ijoolee Oromoo dhangalafutuu, Ethiopian Oromoo fi Oromiyya hin kabajaneen jirachuu hin qabudhu jeedhame jira. Kana boode Oromoon habasha jala adeemtu diina Oromootti, Dhabbileen Oromoo Haalaa duree tokko malee tokko ta’uu qabu, jeechun Uummatii hiriira ba'ee kun gaafatee jira. Uummanii Oromoo dhabba kami iyuu utuu hin egiin wal gurmesee diina irratti tarkanfi fuudhachu qaba jeedhame jira.
Hiriira Europa Belgium Waxabaji 20, 2014 kan adda goodhuu, Oromoon Italy Rome, Milan, Fence Lyon, Paris, Germeny Munich, Berlin, Colene, Dusseldorf Magaloota Holland hunda fi Berlgium irra Oromoo of isaan wal gurmesee argamuu isaati. Kana malee Hirmatoon bayee Ijoole da'iima qabachun adameessa guyya fi halkan gutuu deemun Brussels kan dhufan Yakka wayyanen Baratoota fi uumataa Oromoo irrati dalagduu hiriira fi dhadannoo dhageesisu qoofa uttu hin tanee qawee fudhanee lola jeedhun akka garan isaan gubatee ibsacha turan. Ariin fi quqamii isaan irra mulatuu utuu wayyane TPLF argani meesha argatan hundan falmachuuf qoophi ta'uu isaan mulisa.
Mootummaan wayyanee yakka isheen Oromoo irratti dalagaa jirtu kan ibsuu waraqan qoopha'ee Paarlamaa Europatti kan dhiyyate yamuu ta’uu, Paarlamaan Europa ilee dhimaa kana akka qooratuu wadaa seenani jiru. Kanan durasi List Baratoota Oromoo du’aan , Hidhama, bakka buteen isaan dhabamee fi baratoota mana barumsaa irra ari’aman fi yakka waraan Ethiopia University Jimmaa, Ambo, Wallaga, Manadawalabu, Adama, Haromaya, Diredawa , Matuu fi Gimbtti dalagamee hunda kan ibsuu Europa paarlamaatti dame mirga dhala namaf falmatutti keename qooratama jira. Mootummaa Ethiopiaf garggarsii keenamuu hundi akka dhabatu gaafatamee jira, Mootumman Ethiopia Liqa biyya alatii argatuu hunda Ogganoota TPLF kan samamuu waan ta’eef Liqiin biyya alatti Ethiopiaf keenamuu hundi seeran ala kan samamuu waan ta’ee Liqii fi garggars biyya alatti dhufee tokko ilee Uummataa Oromoo kan hin garggariin ta’uu isaa ibsamee jira. Garggars Ethiopiaf keenamu biyya Tigray qoofaf kan adeemuu yamuu ta’uu kan hafee amoo TPLF tuu gargari akka qoodatan Anga’oota Europaf Gummin paarlamaa Oromoon ibsameef jira.
Kana malee Seeran ala maqaa Investimentiin Oromoon lafa irra buqa’aa waan jiruf, Kubaniya, mootummon akka India chaina, biyya Araba fi Ijoolen Tigray Lafa Oromiyaa, Beneshangul fi Gambela kan humnan qootee bulaa irra fudhatan seera qabeessa waan hin taneef akka lafa Uummataa gadii dhisaan Gummin Paarlamaa Oromoo gaafatee jira. Seeri Mootummaa Abba Hiree TPLF waaliin malata’ee kam iyuu seera qabeesa akka hin tanee Mootumma Europaf ibsamee jira. Sababin isaa Oromoon Milliona 5. 700,000 Nannoo Fifinnee qoofa irra kan buqa'a jira, yamuu ta’uu guutuma Oromiyya keessatti Oromoon Million 10 ol akka buqa'eeti tilmamama. Oromoon lafa irra buqa’ee kun Biyya Euopatti baqaachuuf kara Sudan, Kenya, Somalia fi Djibuti baqaacha jiru kun Europa galee lubu isaa hambifachuu barbada waan ta’eef Europan Oromoo Milliona 10, keesumeesuu irra siirna Abbaa Hiree TPLF angoo irra ari’uun furmata ta’uu isaa Miseens Kommisinin Europa tokko haqa jiru ibsan jiru.
Waluma galatti Oromoo akka wayyaneen yaadu akka hin tanee hirira Waxabajii 20, bara 2014 Europa irratti geggefame irrra hubatamuu ni danda’ama. Dargaggoon Oromoo Italia, Germany, fi Holland fi France irra biyyatti debi'an akka Sirya, Iraq fi Libya Uummataa isaan irratti loluuf waada seenan jiru. Dhaabilee Oromoo ilee tokkuman Qabsoo Hidhannoo biyya keessatti fininsuun ala furmatii akka hin jire ibsan jiru. TPLF biyya ishee irra dabartee Km 500 deemte Oromiyya dhuftee kana Oromoon deebisee biyya isheeti galchuu qaba, TPLF Oromiyya keessa ba’uu qabdi. Diini meesha batuu kam iyuu Oromiyya keessa ba’uu qaba jeechun Oromoon diida isaan mulissan jiru.
Suura Hiriira Europa Belgium Brussels.